Shenzhen Okacc Industrial Co., Ltd. - LiFePO4 ဘက်ထရီနှင့် NiMH ဘက်ထရီများ၏ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ထုတ်လုပ်သူ
မြင့်မားသော စွမ်းဆောင်ရည်- 30C ထုတ်လွှတ်မှု
အသက်ရှည်ခြင်း- 80% SOC တွင် အကြိမ် 3000 လည်ပတ်သည်။
80% SOC တွင် အကြိမ် 3000 လည်ပတ်သည်။
NIMH ဘက်ထရီလုပ်ငန်းတွင် 15 နှစ်
ကျွန်ုပ်တို့သည် ကားပြုပြင်ရေးဆိုင်ပေါင်း 1000+ ကျော်ကို ဝန်ဆောင်မှုပေးခဲ့ပါသည်။
လွန်ခဲ့သည့် 15 နှစ်အတွင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘက်ထရီထုပ်များပြုလုပ်ခြင်း တစ်ခုတည်းကိုသာ လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။ သင့်လုပ်ငန်းသည် ဘက်ထရီလိုအပ်ပါက၊ သင်သည် မှန်ကန်သောနေရာသို့ ရောက်ရှိသွားပါပြီ။ ဤဘက်ထရီအိတ်များကို နိုင်ငံတကာစံနှုန်းများနှင့် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ A-grade ဆဲလ်များနှင့် အဆင့်မြင့်နည်းပညာများဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် 2007 ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး လွန်ခဲ့သည့်နှစ်များတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ သုံးစွဲသူများကို ဆွဲဆောင်ခဲ့ပြီး ဥရောပ၊ အမေရိကန်၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်း၊ တောင်အာရှစသည့် နိုင်ငံပေါင်း 50 ကျော်သို့ တင်ပို့ရောင်းချခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘက်ထရီဒီဇိုင်း၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ရွေးချယ်မှုဆဲလ်များနှင့် BMS၊ အားသွင်းကိရိယာအပါအဝင် စိတ်ကြိုက်ဘက်ထရီထုတ်ကုန်များ၏ ဝန်ဆောင်မှုအပြည့်အစုံကို ပေးဆောင်ပါသည်။
ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ဒီဇိုင်နာများနှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ အင်ဂျင်နီယာများသည် ဂေါက်တွန်းလှည်း ဘက်ထရီများ၊ အိမ်သုံးစွမ်းအင် သိုလှောင်မှု ဘက်ထရီများ၊ ကားဘက်ထရီများ စသည်တို့ကဲ့သို့ မတူညီသော အခြေအနေများအတွက် ဖောက်သည်များ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဘက်ထရီအဖြစ် ဘာသာပြန်ပါသည်။
ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သောစျေးနှုန်းနှင့် Okacc တွင် ပထမတန်းစားအင်ဂျင်နီယာများ၊ ဒီဇိုင်နာများ၊ ထုတ်ကုန်မန်နေဂျာများ၊ အရည်အသွေးအာမခံချက်၊ အရောင်းနှင့် ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုများရှိသည်။
Toyota ကားဘက်ထရီအတွက် Honda Car Battery အတွက် Lexus ကားဘက်ထရီအတွက်
ရှန်ကျန်း OKACC ဘက်ထရီ Ni-MH 6500mAh 245V ဟိုက်ဘရစ်ကားဘက်ထရီ အစားထိုး Toyota Camry xv40 6th 2007-2011
Toyota Camry xv50 7th 2012-2016 အတွက် Hot Sell Ni-MH 6500mAh 245V hybrid ကားဘက်ထရီ အစားထိုး
Toyota Highlander 2006-2009 Hybrid ဘက်ထရီအတွက် အမြန်ပေးပို့မှု Ni-MH 6500mAh 288V Hybrid ကားဘက်ထရီ အစားထိုး
Toyota PRIUS Aqua Prius C အတွက် စက်ရုံမှ တိုက်ရိုက်ရောင်းချမှု Ni-MH 6500mAh 144V ဟိုက်ဘရစ်ကားဘက်ထရီ ပက်ခ် အစားထိုးခြင်း။
အားလုံးကြည့်ရန် Toyota ကားဘက်ထရီအတွက်
Honda CR-Z 2011-2012 အတွက် OKACC Ni-MH 6500mAh 100.8V HEV ဘက်ထရီအထုပ်ကို အစားထိုးခြင်း
Honda Civic 2nd Gen 2006-2011 အတွက် တရုတ်စက်ရုံမှ Ni-MH 6500mAh 158.4V ဟိုက်ဘရစ်ကားဘက်ထရီ အစားထိုး
Honda Insight 2nd Gen 2010-2012 အတွက် လက်ကားရောင်းချသော Ni-MH 6500mAh 100.8V HEV ဘက်ထရီထုပ်
အရောင်းရဆုံး Ni-MH 6500mAh 144V ဟိုက်ဘရစ်ကားဘက်ထရီ အစားထိုး Honda FIT 1st Gen
အားလုံးကြည့်ရန် Honda Car Battery အတွက်
OKACC ဘက်ထရီစက်ရုံမှ Lexus RX450h အတွက် 6500mAh 288V Hybrid ကားဘက်ထရီထုပ်ကို အစားထိုးခြင်း
ထုတ်လုပ်သူ စျေးနှုန်း Ni-MH 6500mAh 288V Hybrid Car Battery Pack Replacement Lexus GS450h
Lexus NX300h အတွက် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် Ni-MH 6500mAh 244.8V Hybrid ကားဘက်ထရီ အစားထိုးမှု
Lexus RX400h အတွက် တရုတ်စက်ရုံစျေးနှုန်း Ni-MH 6500mAh 288V Hybrid ကားဘက်ထရီ အစားထိုး
အားလုံးကြည့်ရန် Lexus ကားဘက်ထရီအတွက်
လီသီယမ်ဘက်ထရီထုပ်ကို စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ရန် အချိန်မည်မျှကြာသနည်း။
လီသီယမ်ဘက်ထရီများကို စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးသည် ယေဘုယျအားဖြင့် အလုပ်လုပ်ရက် ၁၅ ရက်အတွင်း ပြီးမြောက်သည်။
01. ဝယ်ယူသူ၏လိုအပ်ချက်များကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီး ဆွေးနွေးပါ၊ ထို့နောက် နမူနာအတွက် ကိုးကားချက်တစ်ခု ပြုလုပ်ပါ။
03. ထုတ်ကုန်အဓိကရွေးချယ်မှုနှင့် ဆားကစ်ဖွဲ့စည်းပုံဒီဇိုင်းကို လုပ်ဆောင်ပါ။
04. အားလုံးသောဒီဇိုင်းများပြီးစီးပြီးနောက်, ငါတို့နမူနာလုပ်ပါလိမ့်မယ်။
05. ကနဦးလုပ်ဆောင်မှု စမ်းသပ်ခြင်းနှင့် အမှားရှာပြင်ခြင်းတို့ကို အပြီးသတ်ပါ။
06. လီသီယမ်ဘက်ထရီအိတ်များ၏ လျှပ်စစ်စွမ်းဆောင်မှုနှင့် စက်ဘီးစီးအိုမင်းမှုကို စမ်းသပ်စစ်ဆေးပြီး အတည်ပြုပါ။
07. ဘေးကင်းရေး စမ်းသပ်ခြင်း၊ ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့် ပို့ဆောင်ခြင်း ၊ လီသီယမ်ဘက်ထရီများကို စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးသည် အလုပ်လုပ်ရက် 15 ရက်အတွင်း ပြီးမြောက်ပါသည်။
စိတ်ကြိုက် လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်း ဘက်ထရီအတွက် မည်ကဲ့သို့ ကန့်သတ်ချက်များ လိုအပ်သနည်း။
01. လီသီယမ်ဘက်ထရီ၏ အဝင်နှင့်အထွက် ကန့်သတ်ချက်များ
02. Li-ion ဘက်ထရီထုပ်၏ IP အကာအကွယ်အဆင့်နှင့် ဘက်ထရီထုပ်၏ တပ်ဆင်မှုနည်းလမ်းကို ဆုံးဖြတ်ရန် လိုအပ်သည်။ ထို့အပြင် လီသီယမ်ဘက်ထရီ ဒီဇိုင်းတွင် ကြီးမားသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်မည့် လီသီယမ်ဘက်ထရီ pack ကို မည်ကဲ့သို့ ထည့်သွင်းရမည်ကို စဉ်းစားရန် လိုအပ်ပါသည်။
03. လီသီယမ်ဘက်ထရီ၏ အရွယ်အစားသည် လိုက်ဖက်ညီသော လီသီယမ်ဘက်ထရီထုပ်များ၏ စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ် သက်ရောက်မှုရှိမည်ဖြစ်သည်။ စံနှုန်းသည် လက်တွေ့နှင့် အလွန်ကွာခြားသည့်အခြေအနေကို ရှောင်ရှားရန် လီသီယမ်ဘက်ထရီများကို မှာယူခြင်းမပြုမီ ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ဆက်သွယ်ရန် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
04. ကြိုတင်သိရှိထားရမည့်အရာမှာ စိတ်ကြိုက်လီသီယမ်ဘက်ထရီများ၏ ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းကို မျှော်လင့်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ လစ်သီယမ် LiFePO4 ဘက်ထရီများ၏ ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းသည် ယေဘူယျအားဖြင့် အကြိမ် 2000 ဖြစ်သည်။
05. စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ရန်လိုအပ်သည့် လီသီယမ်ဘက်ထရီထုပ်များ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ထိခိုက်စေသောကြောင့် စက်၏အသုံးပြုချိန်ကို သင်သိရန်လိုအပ်ပါသည်။
06. လီသီယမ်ဘက်ထရီများကို ပံ့ပိုးပေးသည့် မော်တာကဲ့သို့သော စက်ပစ္စည်းများအတွက်၊ အဆိုပါ induction load ကိုစတင်သောအခါတွင် အမြင့်ဆုံးပါဝါကို သိရန်လိုအပ်ပါသည်။
07. လီသီယမ်ဘက်ထရီဗူး၏ ဗို့အားသည် ပုံသေတန်ဖိုးမဟုတ်သော်လည်း ကျယ်ပြန့်သောကြောင့်၊ စက်ကိရိယာသည် သက်ဆိုင်ရာ ဗို့အားတန်ဖိုးကို ခံနိုင်ရည်ရှိစေရန် သေချာရန် လိုအပ်ပါသည်။
ဘက်ထရီ၏ အရွယ်အစားနှင့် ပုံသဏ္ဍာန်ကို ဦးစွာဆုံးဖြတ်ခြင်းသည် တီထွင်ဖန်တီးမှုနှင့် ဒီဇိုင်းအတွက် အချိန်များစွာ သက်သာစေမည်ဖြစ်သည်။
အထူးအသားပေး ထုတ်ကုန်များ နောက်ထပ်
Citroen DS5 2012-2016 အတွက် ရောင်းအကောင်းဆုံး Ni-MH 6000mAh 201.6V Hybrid ကားဘက်ထရီ ပက်ခ် အစားထိုး
Peugeot 2012-2016 အတွက် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသော Ni-MH 6000mAh 201.6V Hybrid ကားဘက်ထရီအထုပ်ကို အစားထိုးခြင်း
Cadillac Escalade အတွက် စျေးသက်သာသော တရုတ် Ni-MH 6000mAh 288V Hybrid ကားဘက်ထရီအထုပ် အစားထိုး
Volkswagen Touareg အတွက် Universal လက်ကား Ni-MH 6000mAh 288V Hybrid ကားဘက်ထရီ ပက်ခ် အစားထိုး
Chevrolet Tahoe အတွက် အရည်အသွေးမြင့် Ni-MH 6000mAh 288V Hybrid ကားဘက်ထရီအထုပ်ကို အစားထိုးခြင်း။
စက်ရုံစျေးနှုန်း Ni-MH 6000mAh 300V Hybrid Car Battery Pack Replacement Ford Escape 2005-2009
Lexus Is300h Battery ကို ဘယ်လို အစားထိုးမလဲ။ မင်းဖြစ်နိုင်တယ်…
Hybrid ကားများတွင် မည်သည့်ဘက်ထရီအမျိုးအစားကို အသုံးပြုသနည်း။ ဘယ်အမျိုးအစား…
Toyota Hybrid ဘက်ထရီများသည် မည်မျှကြာကြာခံနိုင်မည်နည်း။ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့်ပတ်သက်၍...
Hybrid ဘက်ထရီများ- Hybrid ဘက်ထရီများ သိထားရန် လိုအပ်သမျှ- ဘာလဲ...
သူများတွေ ငါတို့အကြောင်း ဘာပြောလဲ။
ကျွန်ုပ်တို့တွင် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ ဖောက်သည်များစွာရှိပြီး၊ စတင်သည့်လုပ်ငန်းမှ အတွေ့အကြုံရှိ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချသူများနှင့် တစ်ဦးချင်းဝယ်ယူသူများအထိ၊ OKACC နှင့်ပတ်သက်၍ ၎င်းတို့ပြောလိုသည်ကို ကြည့်ပါ။
OKACC နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဧည့်သည်တွေက ဘာတွေပြောလဲ။